Famakafakana ny Google Allo, ilay fampiharana amin'ny chat miaraka amin'i Google Assistant | Androidsis
Izahay dia mamakafaka ny Google Allo, ilay fampiharana fandefasan-kafatra miaraka amin'i Google Assistant, amin'ny horonan-tsary
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android, hevitra
Google Allo no fampiharana fandefasan-kafatra vaovao ho an'ireo any Mountain View izay navotsotra fotsiny ary tonga miaraka amin'ny zavatra mazava ho zava-drehetra vato misakana amin'ny rindrambaiko hafa toa ny WhatsApp na Telegram. Ny hatsarany lehibe, ankoatry ny fampisehoana avo dia Google Assistant. Ity no ho axis afovoany izay hampiasan'i Google ezaka be dia be hananana resaka voajanahary miaraka amina mpanampy am-peo izay ho hita ao amin'ny resaka rehetra ataontsika.
Hanao fizarana haingana sy mahaliana an'ny tsara indrindra amin'ny Allo izahay mandritra ny ora vitsy niarahanay taminy ary tsikelikely izahay dia hiezaka handrisika ireo mpifandray sy namana ary fianakaviana hametraka azy. Miatrika fampiharana fandefasan-kafatra izahay rohy mivantana amin'ny nomeraon-telefaona ary izany dia hahafahanao mandefa SMS amin'izy ireo hanasana azy ireo hisintona ilay rindranasa avy amin'ny Google Play Store ihany.
1 Google Allo izay hahagaga
2 Ilay vato misakana lehibe
Google Allo izay hahagaga
Google Allo miavaka amin'ny zava-bitany avo lenta Ary ny marina dia ny fandefasana resadresaka, emojis na karazana atiny haino aman-jery rehetra amin'ny chat dia haingana be. Hitanao fa eto i Google dia te-hanolotra rindranasa izay mihetsika tsara ary mifantoka mivantana amin'ny fanamorana ny fampiasana.
Amin'ny fotoana voalohany hanombohantsika an'i Allo dia hisy Mpanampy Google handray anay amin'ny teny anglisy. Ny amin'ny teny Anglisy dia noho ny fahafahantsika miditra amin'ny APK, na dia avy amin'ny Google Play Store aza dia mbola misy safidy hisoratra anarana na hanafoana ny fisoratana anarana, midika izany fa Ho olana amin'ny ora maromaro ananantsika izany amin'ny Espaniôla. Izany dia satria i Google Assistant dia mampiasa ny baikon'ny feo rehetra efa ampiasaintsika ao amin'ny Google Now ihany koa, mba hahatonga ny mpanampy ny feo hahatsapa ho any an-trano rehefa miresaka amin'ny namana na vondron'olona mifandray.
Eto no misy an'i Allo hiavaka tanteraka amin'ny fampiharana hafa, satria ao amin'ny vondrona chat mifandraika, ohatra, amin'ny gastronomy, azonao atao ny mizara trano fisakafoanana ahafahanao manandrana lovia vaovao, fampahalalana momba ny fomba fahandro, zarao ny sarinao mofomamy sôkôla izay noforoninay na fantatray ny vaovao farany mifandraika amin'io lohahevitra io. Io no tombony lehibe ho an'i Allo amin'ireo rindranasa hafa ary hidika izany fa ny resadresaka ananantsika dia manankarena kokoa nefa tsy mila mamela azy ireo amin'izany vaovao rehetra sy atiny avo lenta izany.
Ilay vato misakana lehibe
Manana fampiharana izay miasa tsara izahay, Mpanampy Google izay mamy manandrana ary rohy mankany amin'ireo nomeraon-telefaona izay hahamora ny famporisihana ireo mpifandray hampiasa azy io. Eo no mipetraka ny olana lehibe indrindra misy anao ary misy ny fampiharana fandefasan-kafatra hafa navelan'izy ireo ho "hita" ny azy.
Ary, raha manana rindrambaiko fandefasan-kafatra ianao ary tsy misy olona hifandraisana satria tsy misy mahalala izany amin'izao fotoana izao, ny resaka vava sy ny dokambarotra Google dia tena ilaina tokoa ka mandritra ireo andro sy herinandro voalohany dia mipoitra amin'ny fomba saika miparitaka toy ny foam. Hiankina amin'ny fahombiazan'ny Allo na tsy fahombiazana izany.
Amin'izao fotoana izao dia ny zava-drehetra ho fampiharana mailaka mahasarika miaraka amin'ireto safidy ireto ho an'ny chat, Google Assistant ary fahombiazana avo lenta izay ahafahantsika mifindra amin'ny lafiny iray amin'ny fampiharana mankany amin'ny ilany hafa tsy misy olana lehibe.
Sintomy ny Allo APK
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Izahay dia mamakafaka ny Google Allo, ilay fampiharana fandefasan-kafatra miaraka amin'i Google Assistant, amin'ny horonan-tsary
Google Now on Tap dia nantsoina hoe 'Fikarohana Screen' amin'ny Google beta farany
Ho tonga miaraka amin'ny RAM 2 GB ny Xiaomi Mi Note 8 arak'ireo sary tafaporitsaka ireo